ယုံ ရ မလား?? Panda scared of earthquake? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hoax » ယုံ ရ မလား?? Panda scared of earthquake?
Posted by zoe on Mar 17, 2011 in Hoax, News, World News |2comments
FRAUD Japanese earthquake panda Sichuan province Woolong
Facebook ပေါ်မှာ ဒီပုံနဲ့ ကိုမြင် လိုက်ရ တာ က ဂျပန်ငလျှင် မှာ ငလျှင်ကြောင့် ကြောက် နေတဲ့ pandaပုံလို့ဖော်ပြထား တာ ။်စိတ်မ ကောင်း ဖြစ် တာ နဲ့ google ပေါ်မှာ ရှာကြည့် လိုက် တော့ ။ ငလျှင် ကို ကြောက် လို့ မ ဟုတ် ပဲ ၂၀၀၆ တုံး က တရုတ် ပြည် Sichuan research center မှာ ရိုက် ထား တဲ့ အ စာ တောင်း နေ တဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါ သ တဲ့ ။
Well, well, well. It’s been up for just about ten minutes, and already it appears that the cutest picture EVER is in factaFRAUD. Originally billed asapanda scared after the Japanese earthquake, turns out this picture isaLIE. I mean, the panda is huggingaguy, but not out of fear. Rather, OUT OF HUNGER. Yes, this picture dates back to 2006, and thankfully my friend Neil — who also happens to be the resident panda archivist of my group — pointed this out to me. Evidently the panda is actually clutchingaleg to ask for food.
Ah, but maybe the panda was hungry in the wake ofasmaller but still frightening earthquake. Let the conspiracy theories abound!
*pun credit, sg-dub
A giant panda holdsafeeder’s leg for food at the China Giant Panda Research Center in Wolong, southwest China’s Sichuan province on January 4, 2006.
By Photo Tractatus.
(Edit: I originally posted this photo with the caption: Following the May 12, 2008 earthquake in China, this terrified giant panda grabs the leg ofapoliceman. I found out later that the caption changed on Flickr and that it is NOT true.)
အမေရိကန်တွေ စီးပွားကျလာတော့ ..ငွေတွေလည့်ပါတ်ချင်တာရယ်..။ သူ့ဆေးပစ္စည်းတွေရောင်းချင်တာရယ်နဲ့ Swine Flu ဆိုတာဖြစ်စေလိုက်ပြီး ကမ္ဘာအတိုင်းအတာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ။ စမ်းသပ်စက်တွေ..နောက်ဆုံး 3Mက Mask တွေပါသန်းနဲ့ချီ ရောင်လိူက်ရတယ်..။
အခုလည်း အနုမြုရောင်ခြည်ပြပြီး ဈေးကွက်တင်ဖို့ ကြံနေသလားတောင်ထင်မိတယ်..။
နူစက်ရုံနဲ့ မိုင် ၁၅၀လောက်ပဲဝေးတဲ့ လူ ၁၃သန်းရှိတဲ့ တိုကျိုကလူတွေဘာမှမဖြစ်ရသေးဘူး.။ အာရှမှာဆေးတွေ။ အနုမြူုရောင်ခြည်တိုင်းစက်တွေ အရမ်းရောင်းနေရပြီ..။
ရောင်ခြည်သင့်ရင် သိုင်းရွိက်ရောဂါဖြစ်တတ်လို့ဆိုလား သတင်းထွက်ပြီး အဲဒီဆေးလည်း ပြတ်ကုန်ပြီ..။
နူကလီယာဓာတ်ရောင်ခြည် ဘေးကို ရှောင်ရှား ရန် တိုကျိုမြိုို့ ကိုစွန့်ခွါ ဖို့ပြင်သစ်သမတ က ဂျပန်ရောက်ပြင်သစ် တွေ ကိုတိုက်တွန်း တယ် ဆို ပြီး ဖြစ်နေပြန်ပြီ ။ လေယာဉ် လက်မှတ် တောင် ဝယ် လို့ မရ တော့ ဘူး ဆို တာ TV ပေါ်မှာတွေ့လိုက် တယ် ။ ကျီးလန့်စာစား
့ထိုင်ဝမ် လွှတ်တော် မှာလဲ ဂျပန် က နူကလီယာဓာတ်ရောင်ခြည် ကြောင့် ပညာရှင်နဲ့ အမတ် တွေအခြေအတင် ဖြစ်ကြသေး ။